Ijusi neSmoothie Homogenization kusetshenziswa i-Power Ultrasonics - iHielscher Ultrasound Technology
Amajusi, ama-smoothies neziphuzo kudinga i-homogenization enokwethenjelwa futhi esebenza kahle ukunikeza ukunambitheka nokufiseleka okufiselekayo kanye nokuzinza kwesikhathi eside. Ama-homogenizers e-shear high-shear asetshenziswa kakhulu embonini yokudla neziphuzo ukukhiqiza ama-juice, iziphuzo, ama-purees namasosi ekhwalithi ephezulu. Njengokwelashwa okungashisi, i-ultrasonic high-shear homogenization ivimbela amavithamini namakhemikhali e-bioactive kusuka ekonakaleni okushisayo, ngenkathi eletha ukuzinza okuvelele nokushelela.
I-Ultrasonic High-Shear Homogenization yamaJusi, ama-Smoothies neziphuzo
Ukuqina okuthuthukile kwe-Ultrasonically – ukugwema ukuhlukaniswa kwesigaba kanye nokuqina kwembumbulu: Izithelo nemifino uginindela wehlukaniswe waba izinhlayiya ezincane ezuza ukuzinza okuphezulu, ukugwema inzika nokunikeza ukuthungwa okubushelelezi.
Ukuguqulwa kwe-Ultrasonic kwejusi viscosity nokuthungwa: Izithelo nemifino enjengama-apula, izaqathe, amawolintshi, izithelo zomvini, ulamula notamatisi kunothe ngama-pectin. Ama-Pectin angama-polysaccharides asebenza njengesiqinisi semvelo. Ama-homogenizers e-Ultrasonic akhipha ama-pectin kusuka ku-matrix yeseli bese ewakhiphela kujusi, ngaleyo ndlela andise i-viscosity nokuqina. Ama-homogenizers e-Ultrasonic ngakho-ke makhulu ekusebenziseni izinto zokuzinzisa zemvelo ezinjenge-pectins.
Iphrofayili ye-phytonutrient ethuthukisiwe ngesizinda se-ultrasonic: Ama-homogenizers e-Ultrasonic aphula ama-matrices amaseli futhi akhuthaze ukukhishwa kwama-molecule abambekile njengamavithamini, ama-antioxidants, ama-polyphenols kanye nama-flavonoid kumkhiqizo wejusi. Ama-phytonutrients ngaleyo ndlela atholakala ngokungatholakali futhi atholakala kalula lapho esetshenziswa.
Iphrofayili yokunambitheka eqinisiwe ngenxa ye-sonication: Ama-homogenizers e-high-shear e-Ultrasonic akagcini nje ngokukhipha ama-pectin, kepha nama-molecule okunambitheka, amafutha abalulekile, ushukela wemvelo kanye ne-phyto-nutrient. (Ngokuthola iphrofayli yezakhi ezithuthukisiwe nge-ultrasonically, bheka ucwaningo lwamacala ngezansi) Isizinda se-Ultrasonic sikhipha ama-molecule we-bioactive njengama-flavour compounds namavithamini avela ku-matrix yeseli futhi abenze ukuthi batholakalele ama-buds wokunambitha womthengi.
Iphrofayili Yemibala Eqinisiwe ngenxa yeSonication: Imibala yezitshalo nayo iqukethwe kumatrix eseli lesitshalo. Ama-homogenizers e-Ultrasonic akhipha ama-pigment ezitshalo njenge-carotenoids, i-chlorophyll, i-betalanins ne-anthocyanins futhi ayinciphise ngosayizi wezinhlayiyana. Usayizi we-pigment owehlisiwe usabalalisa ukukhanya kangcono kunezinhlayiya ezinkulu bese uthola umbala oqinisiwe wejusi, i-puree noma usoso.
I-Ultrasonic high-shear homogenizer enengilazi yokugeleza kweseli yokwelashwa kwamajusi, ama-smoothies, ama-purees nososo.
Kungani i-Ultrasonic Juice Homogenization?
Iphrofayili yokunambitheka ethuthukisiwe ngenxa yokukhishwa
Ukwanda kwesivuno sejusi
Inani Eliphakeme Lama-Micronutrient
Ubumnandi obandayo ngaphandle koshukela owengeziwe (I-US ikhipha ushukela wemvelo ongaphakathi kwamangqamuzana futhi iwenze utholakalele ama-buds wokunambitha)
Ukutholakala kwe-bioavailability okuthuthukisiwe kwama-phyto-nutrient
ukuqiniswa kwemithi emincane
Impilo yesheluli ethuthukisiwe
I-Ultrasonic Juice Homogenization – Izinzuzo Eziningi
Ama-homogenizers e-shear high-shear anokwethenjelwa futhi asebenza kahle ekuxubeni iziphuzo ezinjengeziphuzo zezithelo, umpe, amajusi wemifino, ama-smoothies, ama-lemonade afakwe izithelo, iziphuzo zobisi ezinamakha, izinyikinya zamaprotheni, iziphuzo ezifakiwe nokunye.
Ekukhishweni kwejusi nokucindezela, i-ultrasonication ingakhuphula isivuno sejusi. Isibonelo, ukwelashwa kwe-ultrasonic kwandise isivuno sejusi yamagilebhisi kufika ku-3.4%, ngenkathi kunciphisa isikhathi sokwelashwa okuphindwe kathathu. I-Ultrasonication ihlanganisa nokwelashwa kwe-enzymatic futhi inyuse isivuno sejusi esifinyelela ku-2% futhi sifinyeze isikhathi sokwelashwa ngaphezulu kokuphindwe kane uma kuqhathaniswa nokwelashwa kwendabuko kwe-enzymatic. Ukusetshenziswa okulandelanayo kwe-ultrasound kanye nokwelashwa kwe-enzymatic kwandise isivuno sejusi kufika ku-7.3%. Ngokufanayo, kukaphayinaphu ujusi i-ultrasonication iyodwa inyuse isivuno sokukhishwa ngo-10.8% wejusi kusuka kuphayinaphu mash. Ukwelashwa kwe-ultrasonic kuphinde kwathuthukisa okuqukethwe ushukela, ama-acid aphelele, ama-phenolics, novithamini C. (cf.Baslar et al. 2015)
Iziphuzo zokukhiqiza ezinjengamajusi, ulamula olufakwe ujusi nezinye iziphuzo kudinga i-homogenization enokwethenjelwa kanye ne-emulsification yokuzinza, ukunambitheka okuthuthukile nokuthungwa, ukubukeka kokubukeka okukhangayo nokusebenza okuthuthukisiwe. Isibonelo, i-homogenization ye-ultrasonic inikeza ukuzinza okuhlukile, ivimbela ukuhlukaniswa kwesigaba futhi ithuthukise ukunambitheka nokuthungwa kwamajusi, ama-smoothies, kanye neziphuzo ezenzelwe ubisi namaprotheni. Ngaphezu kwalokho ama-homogenizers asezingeni eliphakeme e-shear emulsify kalula izithako ezahlukahlukene ukukhiqiza imulsion ecacile. Ukusetshenziswa okuvamile kwe-emulsification ye-ultrasonic ukulungiswa kwamanzi neziphuzo ezifakwe insangu. Sula iziphuzo zamanzi nezinye iziphuzo kungafakwa nge-ultrasonically ngama-cannabinoids azinzile (isb., CBD, CBG, THC). Ukuze uthole ama-emulsions acacile ngokutholakala okuphezulu kwamakhemikhali asebenzayo, izinhlanganisela ze-bioactive kufanele zenziwe ngosayizi we-nano. I-Ultrasonic emulsification iyindlela esezingeni eliphakeme yokukhiqiza i-nano-emulsions enokubonakala okucacile, ukuzinza okuhlukile, ukutholakala kokusebenza, nokusebenza. Ngakho-ke, i-ultrasonic nano-emulsification isetshenziswa kabanzi ekwenziweni kwemithi yokwengeza (isb. CBD tinctures etc.)
Ngasikhathi sinye, ama-homogenizers e-ultrasonic akhipha ama-molecule we-flavour, ama-bioactive compounds kanye ne-phyto-nutrient okwenza ukuthi atholakale kalula futhi atholakale kalula. Kepha ama-homogenizers e-ultrasonic nawo ancibilikisa ushukela, ama-syrups noma ama-sweeteners futhi ahlakaze futhi ahlaziye izinsini, isitashi nezinye izithasiselo zibe ukumiswa okuzinzile kwesikhathi eside. Iyunithi eyodwa ye-Hielscher ultrasonic inikeza ukukhiqizwa kwejusi nesiphuzo sakho ngokufeza imisebenzi ehlukahlukene yokwenza i-homogenization, i-nano-emulsification, ukukhipha, ukusabalalisa, ukuncibilikisa, ukufaka amanzi kanye nokuxuba.
Umphumela we-sonication ne-UP400S ku-amplitude ka-100μm ku-micro-structure of apple juice.
Isifundo nesithombe: Ertugay & I-Baslar, ngo-2014
Isifundo Samacala: Iphrofayili Yezakhi Ezithuthukisiwe kuJusi e-Sonicated Orange
I-Ultrasonic high-shear homogenization iyindlela engeyona eyokushisa yokulondolozwa kokudla nokulungiswa okunenzuzo yokwenza ngcono ukuzinza nokwenza kungasebenzi ama-microorganisms kumajusi wezithelo ngaphandle kokubangela imiphumela emibi ejwayelekile engathandeki ehambisana nokwelashwa okuvamile kokushisa. UGuerrouj et al. (2016) uphenye imiphumela ye-ultrasonication kokuqukethwe okuphelele kwe-phenolic ne-flavonoid kanye ne-carotenoids ne-ascorbic acid (uvithamini C) kujusi we-orange usebenzisa i-Hielscher Ultrasonics UP200S homogenizer. Bathole ukwanda okuphawulekayo kokuqukethwe okuphelele kwe-phenolic kumasampula wejusi e-orenji anezwi uma kuqhathaniswa nolawulo (bheka ithebula elingezansi). Lokhu kukhuphuka kusuka ku-42.74 kuze kufike ku-69.45mg GAE / 100 ml yokwelashwa kwe-ultrasonic kwemizuzu engama-30. Le miphumela ikhombisa ukuthuthuka okukhulu kumakhemikhali e-phenolic ngaphakathi kokwelashwa kwe-sonication.
Imiphumela yomsebenzi we-DPPH wamahhala wokuqothula ijusi le-orange nayo imelwe etafuleni elingezansi. Amasampuli e-Sonicated akhombise ukwanda okukhulu kwephesenti lokuvinjelwa kwe-DPPH kuqhathaniswa nokulawula okukhombisa izinga eliphakeme lama-antioxidants. Ukuvinjelwa kwamaphesenti we-DPPH kwakungu-37.48%, 35.70%, 34.70% kanye no-35.21% kumasampula enziwe ngemizuzu engu-1, 10, 20 no-30, ngokulandelana uma kuqhathaniswa namasampula wokulawula (21.67%). Lokhu okutholakele kuhambisana nemiphumela etholakala ku-sonicated kasturi lime juice (Bhat et al., 2011). Le miphumela ikhombisa ukuthi ukwelashwa kwe-sonication kuthuthukisa ukukhishwa kwama-antioxidant compounds.
Abaphenyi baphetha ngokuthi ukwelashwa kwe-ultrasonic kwejusi lewolintshi kuholele ekwandisweni okujwayelekile kwamakhemikhali e-bioactive njengama-phenolics aphelele, ama-flavonoids, ama-carotenoids, ama-anthocyanins kanye ne-ascorbic acid ngokuncipha okukhulu kokubalwa kwamagciwane.
Kwesobunxele: ijusi le-orange elingalashiwe; Kwesokudla: ijusi yewolintshi enamabala
I-Ultrasonic high-shear homogenization ikhiqiza ijusi elizinzile ngaphandle kwe-sedimentation
Ijusi lewolintshi elingakwesobunxele alelashwa futhi libonisa umhlabathi ocacile; ijusi le-orange ngakwesokunene li-homogenized nge-ultrasonically futhi linokuthungwa okufana, okuzinzile nokubushelelezi.
Ukuthuthuka kwe-Ultrasonic kuma-phenolics aphelele, ama-flavonoids aphelele, umsebenzi wokuqothula omkhulu we-DPPH, inani le-carotenoids, nokuqukethwe kwe-ascorbic acid kujusi we-orange.
Ukufunda netafula: UGuerrouj et al. 2016
Ama-Ultrasonic Probes namaseli wokugeleza weJusi Homogenization
I-Hielscher Ultrasonics ngumakhi wesipiliyoni wesikhathi eside owenza ama-homogenizers asebenza kakhulu asetshenziswa emhlabeni wonke ekukhiqizeni izimboni zeziphuzo zezithelo nemifino, umpe, ama-smoothies, iziphuzo zamaprotheni, kanye nama-purees nososo. I-homogenization enokwethenjelwa futhi esebenza kahle yeziphuzo zezithelo, iziphuzo kanye nemikhiqizo yokudla uhlelo oludingayo oludinga ama-probe aphezulu we-ultrasonic akhiqiza ama-amplitudes njalo futhi ahambise ishear eyanele ukuthola ukudla okufana nemikhiqizo yesiphuzo. Onke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic aklanyelwe futhi akhiqizelwa ukusebenza ngo-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele. Amaprosesa we-Ultrasonic ayatholakala kusuka kuma-ultrasonicators e-compact 50 watts laboratory kuya kuma-16,000watts anamandla we-inline ultrasonic systems. Izinhlobonhlobo zezimpondo zokulekelela, ama-sonotrode namaseli okugeleza avumela ukusethwa ngakunye kwe-homogenizaer ene-high-shear homogenizaer ngokuxhumana nezinto zokusetshenziswa (isb. Izithelo, imifino, ezinye izithako njll) nezici ezifunwayo zomkhiqizo wokugcina.
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza ama-probes e-ultrasonic asebenza kahle kakhulu angasethwa ngokukhethekile ukuletha isibuko esigcwele sama-amplitudes aphakeme kakhulu. Uma uhlelo lwakho lwe-homogenization ludinga ukucaciswa okungajwayelekile (isb., Ukuhlanganiswa nezingcindezi eziphakanyisiwe kanye / noma amazinga okushisa aphakeme), ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo.
I-Ultrasonic Juice Homogenization ku-Batch naku-Inline Mode
I-Hielscher ultrasonic high-shear homogenizers ingasetshenziselwa i-batch ne-sonication eqhubekayo emgqeni. Ngokuya ngevolumu yesiphuzo nejubane lokucubungula, sizokuncoma ukusethwa kwe-ultrasonic okufanele kakhulu.
Ukondla imifudlana eminingi yokuphakela, engagaganyelwa ngokuzimela ohlelweni lwe-homogenizer eqhubekayo ye-ultrasonic, yenza i-homogenization esemgqeni isebenzise ukwelashwa okuphezulu kwe-shear isikhathi esisebenza kakhulu nesisebenza kahle, esilungele futhi esikwazi ukucubungula amavolumu amaningi weziphuzo neziphuzo.
Ama-Ultrasonic Probes namaseli wokugeleza kwanoma iyiphi iVolumu
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza isibonisi esigcwele sama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze okokusebenza okufaneleke kakhulu kwe-ultrasonic kwesiphuzo sakho noma umkhiqizo wokudla, amandla enqubo elindelekile nezinhloso zokukhiqiza.
Onke ama-homogenizers e-ultrasonic e-Hielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwemiphumela ye-sonomechanically efana ne-homogenization, emulsification, isizinda, i-hydration, ukuncibilika kanye nokulondolozwa. Zonke Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa avumela ukumiswa okuqondile kwe-amplitude. I-Sonotrodes nezimpondo ze-booster yizinsiza ezivumela ukuguqula ubukhulu endaweni ebanzi kakhulu. Izimboni ze-Hielscher ze-ultrasonic high-shear homogenizers zingaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi zilethe amandla adingekayo e-ultrasonic wezicelo ezifunwayo. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokucubungula ijusi, isiphuzo noma umkhiqizo wakho wokudla ngaphansi kwezimo ezilungiselelwe. I-sonication efanelekile yokwenza i-juice homogenization esebenza kahle kakhulu!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa ukudla kwakho & izidingo zokukhiqiza isiphuzo.
Njengebhizinisi eliphethwe ngumndeni neliphethwe ngumndeni, i-Hielscher ibeka phambili amazinga aphezulu ekhwalithi yamaprosesa ayo e-ultrasonic. Onke ama-ultrasonicators aklanyelwe, akhiqizwa futhi ahlolwa kahle ekomkhulu lethu lasekhaya eTeltow ngaseBerlin, eJalimane. Ukuqina nokuthembeka kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuyenza ihhashi lomsebenzi ekukhiqizeni kwakho. Ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi kokulayishwa okugcwele futhi ezindaweni ezifunayo kuyisici semvelo sama-homogenizers aphezulu we-ultrasonic e-shears.
Ijusi, Ijusi kusuka ku-Concentrate, ne-Nectar
Ijusi isiphuzo esenziwe ngokususwa noma ngokucindezelwa kuketshezi lwemvelo oluqukethwe izithelo nemifino. Kungabhekisa naseziphuzweni ezinongiwe ngokugxila. Ijusi ijwayele ukudliwa njengesiphuzo, kepha ingasetshenziswa futhi njengesithako noma ukunambitheka kokudla noma ezinye iziphuzo, njengama-smoothies.
Ijusi lihlukaniswa ngo-100% wejusi, ijusi kusuka ekugxileni, nakumpe. Ijusi engu-100% ijusi yezithelo eyenziwe ngo-100% ngezithelo nemifino yemvelo ngaphandle kokufakwa imibala, izivimbelakuvunda noma ushukela. Noma kunjalo, ijusi yezithelo ingalungiswa ngezindlela ezahlukahlukene, okungukuthi. kusuka kujusi omusha ongagxiliwe noma owenziwe nge-juice concentrate. Kokwangaphambili, izithelo ziyacindezelwa futhi zigcinwe noma zifakwe emabhodleleni ngqo ngemuva kokuvunwa kwezithelo. Ngokuhluka okuncane kwejusi "okwenziwe ngokugxila", ijusi elicindezelwe ligxilwe ngokususa amanzi kujusi osanda kucindezelwa ngaphansi kokwelapha i-vacuum. Ngaleyo ndlela, kutholakala ukugxilwa okufana nesiraphu, okunciphise ivolumu, evumelana nokuthuthwa komkhiqizo wejusi. Ngemuva kokuthumela ijusi egxilile lapho iya khona ekugcineni, iphendulwa ijusi yezithelo ngokungeza amanzi.
Igama elithi umpe libhekisa kujusi wezithelo oqukethe i-acidity yezithelo eningi kakhulu noma uginindela wezithelo ongadliwa njengejusi elingu-100%. Izibonelo ezijwayelekile zezithelo ezikhiqiza umpe ubhanana, ama-mangos, ama-apricot, amapentshisi noma amapheya. Ijusi noma, okuyi-purée ngokuyisisekelo, ihlanjululwa ngamanzi futhi kungenzeka ukuthi ushukela wengezwe ukuyinikeza ukuphuza okuphuzwayo nokunambitheka okumnandi. Okuqukethwe kwejusi yezithelo ku-nectar kuyahluka phakathi kuka-25 no-99% kuya ngokuqukethwe kwezithelo kanye neresiphi yomkhiqizi. Yize umpe ungaqukatha ushukela ongeziwe, awunawo umbala noma izivimbelakuvunda.
Ezinye izinhlobo zesiphuzo eziqukethe ujusi ngamalamuni anongwe ujusi namasi, ama-smoothies nemikhiqizo yejusi eqinisiwe. Amajusi angaba nokukhishwa kusithelo esisodwa noma imifino noma ahlanganiswe emithonjeni yezithelo nemifino emibili noma ngaphezulu. Iziphuzo zezithelo ezithandwa kakhulu zenziwa ngamawolintshi, ama-apula, ama-cranberries noma amagilebhisi. Ezinye iziphuzo ezidumile ezisuselwa kwizithelo zenziwa ngophayinaphu, izithelo zothando, izithelo zomvini, umango, ubhanana, i-cherry ne-kiwi.
Amajusi wemifino yezentengiselwano avame ukwenziwa ngokuhlanganiswa okwahlukene k izaqathe, ama-beet, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ithanga notamatisi. Lezi ezimbili zokugcina, yize kungeyona imifino yobuchwepheshe, zivame ukusetshenziselwa ukukhulisa ukuzwakala. Ezinye izinto ezithandwayo kumajusi wemifino yi-parsley, imifino ye-dandelion, i-kale, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-fennel, i-broccoli namakhukhamba. I-lemon, i-garlic, i-ginger, i-tumeric nezinye izinongo zengezwa ngezinzuzo zezempilo nokwakha amaphrofayili we-flavour athakazelisayo.